मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ? (नामावली सहित) - News20 Media
May 25, 2021 N20LeaveaComment on मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ? (नामावली सहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज नै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा जुटेका छन् ।
ओली सरकारमा राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी हुने चर्चा छ। उनीसँग राजकिशोर यादव, अनिल झा, शरदसिंह भण्डारी र चन्दा चौधरीलगायतको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा छ ।
१० मन्त्रालय दिने तयारी